00 Tools များ RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
[17 / 11 / 2019] Balloon Tourism ကို Kayseri မှစတင်ခဲ့သည်	38 Kayseri
[17 / 11 / 2019] 137 နိုင်ငံနှင့်တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် 197 မျိုးဆက်လမ်းဖောက်လုပ်ရေးသဘောတူညီချက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်	86 တရုတ်
[17 / 11 / 2019] GNrettepe အစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်မြေအောက်ရထားကို 2020 အဆုံးတွင်ဖွင့်လှစ်ရမည်	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[17 / 11 / 2019] Channel Turhan ၏ Channel Istanbul ၏ဖော်ပြချက်	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[17 / 11 / 2019] ၀ န်ကြီး Turhan သည်ဘင်ဂိုတွင်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုလေ့လာခဲ့သည်	12 Bingol
[17 / 11 / 2019] Kars Edirne မီးရထားလမ်းသည် Generation Road ၏အရေးပါသောအချက်အချာတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်	22 Edirne
[16 / 11 / 2019] ရထားလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းများသည် TCDD နှင့်ဒေသန္တရအစိုးရတို့နှင့် ပူးပေါင်း၍ ဖြစ်သည်	06 တူရကီ
[16 / 11 / 2019] TCDD အထွေထွေအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်အကြံပေးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲစတင်ခဲ့သည်	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[16 / 11 / 2019] YHT ရောက်ရှိလာချိန်တွင် Sivas သို့ခရီးသွား of ည့်သည်အရေအတွက်3သို့တက်လာလိမ့်မည်	58 Sivas
[16 / 11 / 2019] TCDD စည်းမျဉ်းကိုတုန့်ပြန်ခြင်း - 'သူတို့ကတာဝန်ရှိသူတွေကိုဆက်လက်ဖုံးကွယ်သွားကြလိမ့်မယ်'	59 Corlu
ပင်မစာမျက်နှာကုမ္ပဏီ00 Tools များ
Talgo ရထားအမိန့်ကနေဂျာမန်မီးရထား 23 interurban အရေအတွက်ပို့ဆောင်ရေးမှခဲ့ကြသည်
06 / 02 / 2019 Levent Ozen 0
ဂျာမန်မီးရထားသည် Talgo မှ 23 Piece ရထားကိုအပြန်အလှန်ပို့ဆောင်ခြင်းအတွက်အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ ဂျာမန်မီးရထား၏5သည်စင်္ကာပူ Talgo နှင့် 23 ရထားလမ်းကြောင်းအကြားဆက်သွယ်ရေးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်သဘောတူညီမှုကိုကြေငြာခဲ့သည် [ပို ... ]
တူရကီအတွက်ပြည်တွင်းကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ရေး Wagon ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းလမ်းတံတား
16 / 08 / 2012 Levent Ozen 1
AKDEMİR METAL SANAYİ İNŞAAT ve TİCARET A.Ş. Adres: Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi N 315 Sokak No:1 16140 Nilüfer – BURSA TÜRKİYE Telefon : +90 (224) 411 11 00 (Pbx) Faks [ပို ... ]
04 / 07 / 2011 Levent Ozen 0
တူရကီအတွက်Hübnerကိုယ်စားလှယ်: Sinan Akok Diegoldjung အဆိုပါ Projektagent Inh ။ Lilian Wolf Jahnstr ။ 41 34311 Naumburg, ဂျာမနီတယ်။ + 49 5625 921624 ဖက်စ် + 49 5625 921625 Mobile EN + 90 534 6668378 Mobile DE [ပို ... ]
တူရကီအတွက် SV ​​Spa ကိုယ်စားပြုမှု
03 / 07 / 2011 Levent Ozen 0
အဆိုပါ Karakoy Bolt ကသင်္ဘောကျင်း CAD အတွက် SV ​​Spa တူရကီကိုယ်စားလှယ်အင်ပါယာ။ Ziyalı Sok ။ မရှိပါ -5Karakoy-Istanbul တယ်လီ - + 90 212 255 11 00 90 212 237 22 37 90 212 253 30 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX [ပို ... ]
တရုတ် CNR ကော်ပိုရေးရှင်းလီမိတက်
30 / 12 / 2010 Levent Ozen 0
နေရပ်လိပ်စာ: 15 ဧရိယာတစ်ခုမှာ, Fangchengyuan, Fengtai ခရိုင်, ဘေဂျင်း, CN - 100078 Fengtai ခရိုင်ဖုန်းနံပါတ်: + 86-10 / 51 89 72 77 ဖက်စ်: + 86-10 / 52 60 82 80 E-Mail က: loriciec@chinacnr.co အငျတာနကျ: ဆက်သွယ်ရန်: Herr ယန် Xiong-ဂျင်
CHASTAGNER Group မှ
နေရပ်လိပ်စာ: ဇီလမ်းကြောင်းက de Mamers FR - 72404, La Ferte-ဘားဖုန်းနံပါတ်: + 33-243 / 60 11 88 ဖက်စ်: + 33-243 / 93 33 55 E-Mail က: cdi@groupechastagner.co အင်တာနက်ကို http: // www ။ groupechastagner.co ဆက်သွယ်ရန်: Herr Jacques Besnard
Changzhou အမြဲစိမ်း Ave Co. , Ltd
နေရပ်လိပ်စာ: CN - Jiangsu ဖုန်းနံပါတ်: + 86-519 / 85 15 80 21 ဖက်စ်: + 86-519 / 85 96 75 19 E-Mail က: hansoonxnumx@hotmail.co အငျတာနကျ: ငါဆက်သွယ်ပါ http://www.cegchina.co: Herr Zhao နှင့် Nio
Centro က de Ensayos y ကAnálisis Cetest, SL
Address: José Miguel Iturrioz, 26 ES – 20200 Beasain Phone: +34-943/02 86 90 Fax: +34-943/02 86 61 E-Mail: cetest@cetest.es Internet: Contact: Herr Asier Jauregi 10.2.13 Testing services 10.3 Analysis / [ပို ... ]
လိပ္စာ: 21 Rue Marcel Pagnol FR - 69694 Venissieux ဖုန်းနံပါတ်: + 33-4 / 72 78 35 10 ဖက်စ် - + 33-4 / 72 78 35 39 အီးမေးလ် - ablanchard@centralp.fr.fr .fr ဆက်သွယ်ရန် - Herr André Blanchard 7.3.11 TFT-LCD မျက်နှာပြင်များ [ပို ... ]
cellform AG က
လိပ်စာ: Im Tobel4CH - 8340 Hinwil ဖုန်းနံပါတ်: + 41-44 /938 33 80 ဖက်စ် - + 41-44 /938 33 85 E-Mail: info@cellform.ch အင်တာနက်: http: //www.cellform ။ ch ဆက်သွယ်ရန် - Herr Stefan Lelli 6.5.51 ဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်လျှောကျခြင်း [ပို ... ]
CEIT Entreprises သည်
လိပ္စာ: 32, rue des Aubuies - ZI Nord FR - 86200 Loudun ဖုန်းနံပါတ်: + 33-5 / 49 98 37 28 ဖက်စ် - + 33-5 / 49 98 26 92 အီးမေးလ် - franz.konrath@fraz.frr.iner : Herr Franz Konrath 7.3.5 [ပို ... ]
နေရပ်လိပ်စာ: 10 Avenue du Stade de France FR - 93200 Saint-Denis ဖုန်းနံပါတ်: + 33-1 / 58 69 40 00 E-Mail က: direction.communication@cegelec.co အငျတာနကျ: ငါဆက်သွယ်ပါ http://www.cegelec.co: Herr Zdenek Vytous 3.2.49 3.2.51 converter ပြောင်းပြန်လှန်
Balloon Tourism ကို Kayseri မှစတင်ခဲ့သည်
137 နိုင်ငံနှင့်တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် 197 မျိုးဆက်လမ်းဖောက်လုပ်ရေးသဘောတူညီချက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်
GNrettepe အစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်မြေအောက်ရထားကို 2020 အဆုံးတွင်ဖွင့်လှစ်ရမည်
Channel Turhan ၏ Channel Istanbul ၏ဖော်ပြချက်
၀ န်ကြီး Turhan သည်ဘင်ဂိုတွင်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုလေ့လာခဲ့သည်
Kars Edirne မီးရထားလမ်းသည် Generation Road ၏အရေးပါသောအချက်အချာတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်
Kadikoy Tavsantepe မြေအောက်ရထား Times
ယနေ့သမိုင်းတွင် - 17 နိုဝင်ဘာ 1871 Baron Hirsch World
ရထားလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းများသည် TCDD နှင့်ဒေသန္တရအစိုးရတို့နှင့် ပူးပေါင်း၍ ဖြစ်သည်
ပြန်လည်သုံးသပ်မှုအောက်ရှိ Keltepe နှင်းလျှောစီးစင်တာနှင့်Eğriova Pond
«	နိုဝင်ဘာလ 2019 »
နိုဝင်ဘာလ 18 @ 14: 00 - 15: 00
ဝယ်ယူရေးအသိပေးချက်: သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာစနစ်များကို Maintenance နှင့်ပြုပြင်န်ဆောင်မှုများ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ပုဂ္ဂလိကလုံခြုံရေးဝန်ဆောင်မှုခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မည် (TÜLOMSAŞ)
နိုဝင်ဘာလ 18 @ 15: 00 - 16: 00
ဝယ်ယူရေးအသိပေးချက် - Tecer-Karagöl-Kangal လိုင်းဆက်သွယ်ရေး၊ အချက်ပြ၊ စွမ်းအင်နှင့်ဖိုင်ဘာအော့ပတစ်ချောင်းတင်ခြင်းနှင့်ထုတ်လွှင့်ခြင်းစနစ်များတပ်ဆင်ခြင်း
နိုဝင်ဘာလ 19 @ 10: 00 - 11: 00
ဝယ်ယူရေးအသိပေးစာ: ဆက်သွယ်ရေး, လျှပ်စစ်, ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာအလုပ်
တင်ဒါကြေငြာခြင်း: Ankara Kayseri လိုင်း Km: 43 + 600'da မီးရထားလမ်းမကြီး
နိုဝင်ဘာလ 19 @ 10: 30 - 11: 30
တင်ဒါအသိပေးချက် - Ankara Kayseri လိုင်း KM: 43 + 600 (မီးရထား) လမ်းလျှောက်လမ်းလျှောက်ဆောက်လုပ်ရေး
Bogie Chassis စက်ရုပ်ဂဟေဆော်ခြင်းအလိုအလျောက်စနစ်ပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်း (TÜVASAŞ)
နိုဝင်ဘာလ 19 @ 14: 30 - 15: 30
ဝယ်ယူရေးအသိပေးချက်: Bogie Chassis စက်ရုပ်ဂဟေဆော်ခြင်းအလိုအလျောက်စနစ်၏ဝယ်ယူရေး
Irmak Zonguldak လိုင်းကီလိုမီတာ - 378 တင်ဒါရလဒ်မှာ 220 + Overpass
Irmak Zonguldak လိုင်းကီလိုမီတာ - 370 တင်ဒါရလဒ်မှာ 517 + Overpass
Irmak Zonguldak လိုင်းတွင်ကွန်ကရစ်နံရံများနှင့်ရေနုတ်မြောင်းများတည်ဆောက်ခြင်းကွန်ကရစ်ဆောက်လုပ်ခြင်း
TCDD ၀ န်ထမ်းခန့်ထားမှုခေါ်ယူခြင်းအင်တာဗျူးရလဒ်
ဝယ်ရန် TCDD YHT စက်ယန္တရား
TÜVASAŞသည် National Train Project တွင် 12 အင်ဂျင်နီယာများကိုစုဆောင်းနေသည်။
BURULAŞ5သည်အမြဲတမ်းအလုပ်သမားများခန့်အပ်ရန်
DTD မှ TCDD သို့Taşımacılık A.Ş. အထွေထွေမန်နေဂျာYazıcıသို့သွားရောက်ခြင်း
TCDD ၀ န်ထမ်းများအတွက်3သောင်းနှင့်ချီသောအရောင်းမြှင့်တင်ရေး
Ordu ရှိ Melet တံတားပြီးစီးခြင်း
Marmaray 365 ခရီးသည်တစ်ထောင်၊ 15 ဇူလိုင်လအာဇာနည်တံတား 156 တစ်ထောင်ယာဉ်များသည်တစ်နေ့တာအတွက်အကျိုးရှိ
Kadikoy Ibrahimaga တံတားကျဆင်းနေသည်!5မွန်းလမ်းလျှောက်သူ
Gers Up သို့ Mersin၊ မီးရထားနှင့်လေဆိပ်
Istanbul Airport မှ Hava-Sen ၏ဖော်ပြချက်
Otokar Atlas သည် Sakarya စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးစက်ပစ္စည်းနည်းပညာနှင့်အစာကျွေးမွေးမှုအကြိုက်ဆုံးဖြစ်သည်
Ford Driving Academy သည်ငယ်ရွယ်သောယာဉ်မောင်းများကို Champion Pilots များနှင့်အတူအသိပညာပေးသည်
Otokoçမှ Volvo ကားများအတွက်အထူးစောင့်ရှောက်မှု
Defender US သို့ပထမဆုံးအကြိမ်ထွက်ခွာခြင်း
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး Connections ကို
RayHaber မော်ကွန်းတိုက် (လစဉ်)
ကမ်ဘာပျေါတှငျက Metro နှင့်တူရကီ
2019 နေ့စဉ် Express ကိုရထားလက်မှတ်စျေးနှုန်းများ YHT တောင်တက်နှင့်တောင်တက်နာရီ Times သတင်းစာ